Umfazi waseLibra emtshatweni: Ngaba ungumfazi onjani? - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Umfazi waseLibra emtshatweni: Ngaba ungumfazi onjani?
Umfazi waseLibra emtshatweni: Ngaba ungumfazi onjani?
Umfazi waseLibra ufuna umsesane omkhulu kwaye oxabisekileyo womtshato uphumle kwisandla sakhe sasekhohlo ngaphezu kwawo nawuphi na umntu wasetyhini kwi-zodiac kuba umqondiso wakhe ulawula intsebenziswano.
Ke ngoko, umnqweno wakhe wokwabelana ngobomi bakhe umile nzulu emphefumlweni wakhe, oko kuthetha ukuba uyakuhlala enqwenela ukutshata. Akumangalisi ukuba aphuphe umtshato wasentsomini kunye namahobe amhlophe kunye nenqwelwana yehashe ukuze imse ecaweni.
Umfazi waseLibra njengomfazi, ngamafutshane:
Iimpawu: Inengqiqo, inomdla kwaye ilungelelene
Imiceli mngeni: Abasweleyo, abazingcayo nabangakhathaliyo
Uya kuthanda: Ukwenza izicwangciso kunye neqabane lakhe
Kufuneka afunde: Ukubona ngwevu nayo, ayisiyomnyama okanye mhlophe kuphela.
Umfazi waseLibra njengomfazi
Umfazi owazalelwa eLibra liqabane elinomdla kakhulu ngokwesondo kunye neqabane lobomi. Umhle kwaye ubufazi kuba uVenus, iplanethi yobuhle nothando, uyamlawula.
Amadoda amaninzi anokulifumana eli nenekazi linzulu kwaye linomtsalane ngendlela emangalisayo. Indoda esisityebi eye yakwazi ukufezekisa impumelelo isencinci inokwenza umfazi ofanelekileyo aphume kuye ukuba nje ukhusela kwaye unika.
Ulinenekazi eliqondayo elinokuqinisekisa nabani na ngayo nantoni na kwaye linobubele kakhulu. Umfazi waseLibra ukwadume ngeendlela zakhe ezifanelekileyo zokulamla ungquzulwano.
loluphi uphawu ngoFebruwari 3
Unokwenza umsebenzi wegqwetha okanye umgwebi ngokulula kuba uyakwazi ukubona onke amacala ebali. Kusenokwenzeka ukuba uya kunceda abantu abaninzi kwaye ukuya kuthi ga kwicandelo lothando ebomini bakhe, unokuzibona ephumelele apha.
Injongo yakhe njengelungu lalo mphakathi kukuzisa uxolo, ukulinganisela kunye nobulungisa kwiimeko ezibonakala zingenanto enye okanye ngaphezulu kwezi zixabiso.
Ke ngoko, unokudala imeko-bume evisisanayo naphina apho aya khona, esi sisizathu sokuba akwazi ukuziqhelanisa ngokulula.
Uninzi luya kumfumanisa ebuthathaka kwaye engaqhelekanga njengoko enokubonakala ebuthathaka, kodwa akabuthathaka kwaphela. Eli nenekazi linokuba liqabane elikhulu lengxoxo kuba ulumkile kwaye akaze ajonge ukuqala ingxabano.
Njengombandela, enye yezona mpawu zakhe zibalaseleyo kukwazi ukugcina uxolo. Kubonakala ngathi umfazi waseLibra uneemvakalelo ezifanelekileyo zokuphatha abanye abantu ngokuchanekileyo. Ulinenekazi lokwenyani kwaye nayiphi na indoda ingathanda ukuba nayo ecaleni kwakhe, ingasathethi ke ukuba kulula kangakanani kuye ukulungelelanisa umsebenzi wakhe kunye nobomi bosapho.
Aries indoda kunye gemini ukuhambelana komfazi
Ngelixa enabahlobo abaninzi, ngekhe abatyeshele abo abathandayo okanye alibale ukujongana nemicimbi ekhaya. Umyeni nabantwana bakhe baya kuxhamla kuyo yonke ingqalelo nothando lwakhe.
Xa kuziwa kwizicwangciso zakhe zomtshato kunye nomtshato xa zizonke, nguye owenza izicwangciso kunye nezigqibo ezinkulu.
Ungaze uthandabuze malunga nembono yokuba kunye nendoda enye ubomi bakho bonke, ngekhe abe selubala kakhulu naye, ke uyakuhlala enemfihlakalo eseleyo kumyeni wakhe.
Eli nenekazi ngokuqinisekileyo alizukuvumelana nento ethethwa ngumcwangcisi walo womtshato, oko kuthetha ukuba umtshato wakhe uyakuba mnandi kwaye wahlukile.
Ngokucacileyo, izithethe zoluntu ziya kuhlonitshwa, kodwa uya kuqinisekisa ukuba umsitho ujongeka kwaye uziva ukhethekile kakhulu kuba ulunge kakhulu ekwenzeni izinto zibonakale zinomdla kunokuba zinjalo.
Xa ihanjiswa ebantwini, umfazi waseLibra uchazwa njengolungileyo, onesisa kwaye olungileyo. Nangona kunjalo, ukwanoxanduva, uyala kwaye unobuntu obunokutsala nayiphi na indoda.
Uzimisele ukuzincama ngenxa yomtshato wakhe
Abantu baya kubona ukuba ubaluleke kangakanani emtshatweni kwaye uzimisele kangakanani ngawo. Ngapha koko, ubomi bakhe buhamba kakuhle xa ekunye nomntu kunokuba xa eyedwa.
Ukhuseleko kunye nokwanelisa umtshato anokukuzisa kumenza azive engcono ngaye. Olu luhlobo lokuzinza kwenenekazi laseLibra elifuna kakhulu.
Eqinisekile kwaye ezithembile, isigqibo sakhe sokutshata siya kwenziwa emva kokuba esihlalutye ngocoselelo. Umqondiso wakhe ulawula umtshato, esi sisizathu sokuba kwenziwe imitshato emininzi ngo-Okthobha, enye yeenyanga zokuzalwa kukaLibra.
Xa batshatile, abantu abakulo mqondiso konke malunga nokugcina ibhalansi kumanyano lwabo. Banika ukubaluleka kakhulu kubudlelwane babo, ingozi yokuphulukana nobuntu babo buyinyani kule meko.
Umfazi waseLibra kufuneka agcine engqondweni ukuba ngamanye amaxesha kufuneka emke kwiqabane lakhe kwaye enze izinto yedwa. Ngokuthanda ubunewunewu kunye nomtsalane, amadoda amaninzi aya kumzisela izipho kwaye ayonakalise le ntombazana.
loluphi uphawu lwe-zodiac ngoJulayi 4
Uya kukwazi ukugcina ibhalansi kuluhlu lwabantu abathandayo, ngoko akasokuze athandane kakhulu ukuba akathandani. Akakwazi ukuma amanyundululu kunye nomdlalo weqonga, kodwa ngamanye amaxesha ubonakala ekufumana ebomini bakhe kuba mhle kakhulu kwaye amadoda afuna ukulwa naye.
Indoda yakhe iya kuyithanda le ntokazi. Okukhona esiya esondelana nendoda, kokukhona iya kutyhila lonke ulangazelelo ahlala ezifihlile.
Uyakuyithanda kwaye ayihloniphe indoda yakhe, ndingasathethi ke ukuba uzomxhasa kangakanani, nokuba amaxesha mahle okanye mabi. Ngapha koko, une-intuition elungileyo kwaye unoxanduva.
Ubonakala ehambelana kakhulu nobomi bomtshato, ke umfazi waseLibra unokuthathwa njengomnye wabafazi abafanelekileyo kwi-zodiac. Umqondiso wakhe umenza azive engaphelelanga xa engabandakanyeki kubudlelwane.
Umtshato ungenza eli nenekazi ukuba lizive lihle ngaye kuba liza kunceda ebomini bakhe. Nangona kunjalo, le mfuno yokulingana anayo inokuba sesona sizathu sakhe sikhulu njengoko enokulungelelanisa umbono wesibini kunye nokwenza izigqibo ngokusekwe koku.
Ayisiyonto imbi leyo, kodwa kufuneka ayigcine engqondweni into yokuba ubuqu bakhe bubaluleke kakhulu. Kubonakala ngathi uyanikezela ngokulula xa iqabane lakhe liyamphikisa, ndingasathethi ke ngoko ukuba kuninzi ukuzincama kunye nokulalanisa ahlala ekulungele ukukwenza emtshatweni nasemsebenzini.
Kuya kufuneka ukuba abone umhlaba ngamehlo omntu ongatshatanga naye, nokuba lingabonakala lijijekile kangakanani na ixesha kuye.
Xa ubudlelwane bakhe bungazukusebenza, uyakuba ngulowo uthi unikezele yonke into ukuze atshintshe imeko. Ingavakala ngathi iyazingca ngaye ukuba athethe yonke le nto, kodwa ayisiyiyo into yokuba izinto zinokwenzeka ngendlela athe zenzeke ngayo.
Uphawu lweZodiac ngo-Epreli-1
Umfazi waseLibra kufuneka asoloko ekhumbula ukuba olunye ubudlelwane bakhe alufanelanga ngokwaneleyo umgudu nokuzincama kwakhe. Umtshato kufanele ukuba ubambisane ngokulinganayo ekunikezeni nasekuthatheni, ke ukuba iqabane lakhe alikuqondi konke oku, kufuneka limnike kwaye liqhubeke nobomi.
Ukuhla kwendima yakhe njengomfazi
Abafazi abazalelwe eLibra baziwa ngokuzisa uxolo kubo bonke ubudlelwane babo, ukusuka kwabo banezihlobo zabo ukuya kolona lwalamano lusondeleyo.
Bayayazi indlela yokuxoxa kwaye uninzi lwabahlobo babo bahlala bebabiza ukuba bazolise izinto xa imeko ishushu kakhulu.
I-diplomatic kunye neentloko ezincinci, abafazi baseLibra bayayazi indlela yokwenza abantu bonwabe. Inenekazi elikulo mqondiso aliyi kuhlala litshatile nendoda ejonge ukuphikisana nayo ngalo lonke ixesha.
Ufuna ukuvumelana kwaye ujonge ulungelelwaniso kuyo yonke into ayenzayo. Umntu ongenathemba akanakuhlala ixesha elide ejikeleze eli nenekazi kuba uyakudinwa kakhulu seso simo sengqondo kwaye aqale ukumgwema.
Ngaphandle kokufuna lonke ixesha ukubandakanyeka kubudlelwane, unokuba nakho ukukhula okuphucukileyo kokuzikhusela kwaye uya kuthintela ukuphela nendoda engeyiyo, nokuba oku kuthetha ukungakhathali kunye nokuziphatha okubi.
Umtshato kunye neZodiac Signs ezichazwe ukusuka ku-A ukuya ku-Z
Ilanga nenyanga kwilibra
Ubudlelwane kunye neempawu
Umona Neempawu Ezichazwe Ukusuka ku-A kuye ku-Z
Umdlalo oLungileyo weLibra: Ngubani Ohambelana kakhulu naye?
Iimpawu zobudlelwane beLibra kunye neengcebiso zothando
Ukuhambelana kweLibra eluthandweni
Ilanga iLies Libra inyanga: Ubuntu obuHloniphekileyo
Indoda eyi-Aries kunye nePisces yomfazi ukuhambelana kwexesha elide
Taurus indoda taurus ubudlelwane bomfazi
loluphi uphawu ngo-Okthobha 14
sagittarius indoda kubudlelwane
Umqondiso weZodiac ka-Epreli-7
Uphawu lwe-zodiac ngoJulayi 12 wokuzalwa